Leon’ny Governemanta Ao An-toerana, Miantso Vonjy Amin’i Leonardo DiCaprio Ireo Mpiaro Ny Tontolo Iainana Siberiana · Global Voices teny Malagasy
Leon'ny Governemanta Ao An-toerana, Miantso Vonjy Amin'i Leonardo DiCaprio Ireo Mpiaro Ny Tontolo Iainana Siberiana
Voadika ny 12 Avrily 2017 13:32 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, Français, Ελληνικά, Swahili, English
Mpiaro ny tontolo iainana ao Krasnoyarsk miantso an'ny Dr. DiCaprio. Sary: Vkontakte
Araka ny angano malaza ianaran'ny Rosiana maro any an-tsekoly, nanasa “mpitantana” avy any Skandinavia ny Rosiana taonjato 11 lasa izay mba hanampy hitondra ny taniny. Ilay antsoina hoe mpitarika ny foko antsoina hoe “Varangian” (avy amin'ny faritanin'i Soeda sy Norvezy maoderina) no nanana ny fahaiza-mitantana, ary nanampy betsaka an'i Rosia Fahiny izy ireo, mitohy ny tantara.
Tonga ary lasa ny vanim-potoanan'ny Varangians, saingy mbola mitady mpamonjy hafa any ivelany ny Rosiana sasany amin'izao fotoana izao. Ao Krasnoyarsk, tanàna fahatelo lehibe indrindra any Siberia, nahita ny olona tadiaviny ireo mpiaro ny tontolo iainana eo an-toerana: tsy iza fa ilay kintan'ny Hollywood, Leonardo DiCaprio.
Mba hisarihana ny saina amin'ny fahalotoan'ny rivotra izay manempotra ny tranon'izy ireo, vao haingana ireo mpikatroka ao an-toerana no nampiseho sora-baventy lehibe maromaro misy ny endrika tsara tarehin'i DiCaprio manerana ny tanàna, miaraka amin'ny antsom-pahakiviana manao hoe, “Leon, arovy amin'ny arintany i Krasnoyarsk!”
Dingana farany amin'ny fanentanana iadiana amin'ireo matanjaka ao an-toerana izay naharitra an-taonany maro izany. Tamin'ny volana lasa, ohatra, nanao fihetsiketseham-bahoaka ny olom-pirenena mba hitaky ny hanovàna ny angovo miasa any an-trano izay arintany ho lasa etona voajanahary, izay antenain'ireo mpiaro ny tontolo iainana fa hampihena ny fandotoan'ny rivotra.
Fantatra amin'ny asa fiarovana ny tontolo iainana i Leonardo DiCaprio, mpanorina ny Fikambanana fiarovana ny biby (Wildlife Conservation) tamin'ny taona 1998 sy ambasadaoron'ny fiovaovan'ny toetr'andro tao amin'ny Firenena Mikambana. Rehefa nanaiky ny loka Oscar tamin'ny herintaona, natokany tamin'ny famahàna olan'ny toetr'andro ny ankamaroan'ny lahateniny.
Maneho ny fironana manerantany ny antson'ireo mpiaro ny tontolo iainana ao Krasnoyarsk, raha nandany taona maro ny mpikatroka nandresy lahatra ireo manampahefana ao an-toerana tsy namaly, alohan'ny iantsoana ny vondrom-piarahamonina malaza manerana izao tontolo izao, ampiasaina amin'izay ny olo-malaza manerantany mba hisarihana ny saina amin'ny zavatra arovan'izy ireo.
Namorona ny “petra-kevitry ny saka kely mahafatifaty amin'ny fikatrohana nomerika” ilay mpampianatra ambony Ethan Zuckerman (izay mpiara-manorina ny Global Voices), petra-kevitra milaza fa eo anelanelan'ny sarin'ny saka mahafatifaty sy ny selfie isan-karazany, dia mety hahomby ireo endrika vaovaon'ny fikatrohana ara-tsosialy.
Amin'ny alalan'ny fanantonana sora-baventy miantso an'i Leonardo DiCaprio, tsy nametraka fanerena mivantana ho an'ireo manampahefana ao an-tanàna ny mpiaro ny tontolo iainana ao Krasnoyarsk, saingy afaka misarika ny sain'izy ireo ankolaka manoloana ny olana ny dokambarotra, angamba mahomby kokoa noho ny fihetsiketsehana mahazatra eo ivelan'ny lapan'ny tanàna.
Ny olana mahazatra amin'ny fanentanana malaza dia tetezamitan'ny tolona hidirana eny an-dalambe miala amin'ny solosaina. Ary tsy azo eritreretina mihitsy ihany koa fa ny mety hanampy amin'ny fanentanana ao Krasnoyarsk dia i DiCaprio tenany mihitsy no mamoaka ny zava-misy ao an-tanàna.
Mandra-pahatongan'izany, efa mahita vazivazy sahady amin'ny antso hafahafa hita ao Krasnoyarsk ireo mpiserasera aterineto Rosiana. “Tsara kokoa raha miantso fanampiana amin'i Chuck Norris ianareo. Ny lavaka amin'ny arabe ihany no hain'i Lee vahana, “hoy ny olona sasany nananihany. Amin'ny fahafantarana amin'ireo horonan-tsarimihetsikan'i DiCaprio, nanoratra tamin'ny fanehoan-kevitra antserasera ny hafa hoe: “Miantso vonjy amin'i Tarantino miaraka amin'ny herisetra eny an-dalambe izy ireo.”